अमेरिकामा अलि मियाँ – अली मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठान
मुस्लिम समुदायका भएर पनि लोककवि अलि मियाँले जीवनभर नेपाली लोक वाङ्मयको सेवा गरिरहे। गाउँ–गाउँ पुगेर नेपाली लोकगीत खोजी गरे, तिनलाई बटुलेर किताब ल्याए, आफैं गाएर एल्बममा सुरक्षित पारे। आठ वर्षअघि उनको निधन भएयता पुत्र हनिफ मियाँ बुबाका ‘कीर्ति फैलाउन’ कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। पोखरामा अलि मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठान स्थापना गरी नेपाली लोकगीत/संगीत प्रवद्र्धनमा लागि परेका ६८ वर्षीय हनिफ बुबा अलि मियाँका कीर्तिलाई अमेरिकासम्म पुर्‍याएर हालै मुलुक फर्केका छन्। अलि मियाँकै नामबाट मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाली स्रष्टालाई सम्मान गर्दै हिँडेका उनी केहीअघि भारत र बंगलादेशसम्म पुगेका थिए। यसपटक अमेरिका पुगेर नेपाली लोक वाङ्मयमा योगदान पुर्‍याउने स्रष्टा खोजी गरेर आएका हुन्।
मुस्लिम समुदायका भएर पनि लोककवि अलि मियाँले जीवनभर नेपाली लोक वाङ्मयको सेवा गरिरहे। गाउँ–गाउँ पुगेर नेपाली लोकगीतखोजी गरे, तिनलाई बटुलेर किताब ल्याए, आफैं गाएर एल्बममा सुरक्षित पारे। आठ वर्षअघि उनको निधन भएयता पुत्र हनिफ मियाँ बुबाका ‘कीर्तिफैलाउन’ कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। पोखरामा अलि मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठान स्थापना गरी नेपाली लोकगीत/संगीत प्रवद्र्धनमा लागि परेका६८ वर्षीय हनिफ बुबा अलि मियाँका कीर्तिलाई अमेरिकासम्म पुर्‍याएर हालै मुलुक फर्केका छन्। अलि मियाँकै नामबाट मेचीदेखि महाकालीसम्मकानेपाली स्रष्टालाई सम्मान गर्दै हिँडेका उनी केहीअघि भारत र बंगलादेशसम्म पुगेका थिए। यसपटक अमेरिका पुगेर नेपाली लोक वाङ्मयमा योगदानपुर्‍याउने स्रष्टा खोजी गरेर आएका हुन्।
केही महिनामै नेपाली लोक वाङ्मयको प्रवद्र्धनमा समर्पित अमेरिकी नागरिक अन्ना स्टर सम्मानित हुँदै छिन्। एक महिना अमेरिका बसाइ क्रममानेपाली लोक दोहोरीमा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी अन्नाबारे हनिफले पत्तो पाएका हुन्। ‘सम्मान भनेको बोलाएर हैन, गएर दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाईअलि मियाँ लोक वाङ्मय प्रतिष्ठानले अभ्यास गर्दै आएको छ,’ नाकाबन्दीकै बीचमा त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लेका हनिफले भने, ‘यसो भएमा स्रष्टालेथप सम्मानको महसुस गर्छन्।’ गैरनेपाली भएर पनि नेपाली लोकगीत/संगीतलाई माया गर्ने र त्यसको प्रवद्र्धनमा जुट्नु निकै अर्थपूर्ण रहेको दाबीगर्दै हनिफले अन्नालाई प्रोत्साहन गर्न अलि मियाँ सम्मान दिन लागेको बताए। सम्मानसँगै अमेरिकामा नेपाली लोक वाङ्मय प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यलेहनिफले अलि मियाँको नाममा संस्था नै दर्ता गरेर आएका छन्। अमेरिकी कानुनअनुसार म्यासाच्युसेट्समा उनले अलि मियाँ फोक म्युजिक फोरमदर्ता गरेका हुन्। जसको सल्लाहकारमा अमेरिकाका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा गायक प्रेमराजा महत रहेका छन्।
फोरमको नेतृत्व भने अमेरिकामै बसोबास गर्दै आएका हनिफ पुत्र हिक्मत मियाँले गरेका छन्। सचिवमा सुरेन गुरुङ र सदस्यहरूमा पदम कार्की, यमपौडेल, अब्दुल करिम, विमला कार्की, दीपक लामा र सुरेश राना छन्। दर्ता भएको केही दिन नबित्दै फोरमले अमेरिकाकै ग्रेट बोस्टन नेपालीकम्युनिटीसँग मिलेर आउँदो भाइटीकाको भोलिपल्ट डा. तारानाथ शर्मालाई अमेरिकामा सम्मान गर्न लागेको छ। ‘ग्रेट बोस्टन नेपाली कम्युनिटीकैनियमित कार्यक्रममा डा. शर्मालाई निम्त्याएर सम्मान गर्न चाहेका हौं,’ फोरमका अध्यक्ष हिक्मतले भाइवरमा भने, ‘केही महिनामै दिइने अलि मियाँपुरस्कारबाट भने अन्नासँगै सामाजिक/सांस्कृतिक सबै हिसाबले अमेरिकामासक्रिय स्रष्टा प्रेमराजा महत र यम पौडेललाई पनि सम्मान गर्दै छौं।’हनिफले भने अमेरिकामा भइरहेको नेपाली साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधिबाट आफू निकै प्रभावित भएको बताए। ‘नेपाली जहाँ पुगेका छन्, त्यहाँलोकवाङ्मय पनि सँगसँगै पुगेको पाएँ,’ उनले भने, ‘अमेरिकाका हरेक नेपाली घरमा चन्द्रसूर्य अंकित नेपाली झन्डा देख्न मन थाम्नै सकिन खुसीले।’
अमेरिका पुग्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)को स्वागत पाएका हनिफले त्यहाँको विकासबाट धेरै सिक्न सकिने अनुभवसुनाए। ‘बूढाबूढीको एकदमै सम्मान हुने रहेछ, सरकारले नै स्याहार गर्ने मान्छे र भत्ता दिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘यहाँ लोडसेडिङ छ, त्यहाँ त हरेकरूखलाई पनि बिजुलीको व्यवस्था हुँदोरहेछ।’